ဂျပန်က ကိုယ်နေတဲ့ အခန်းဟာ ခိုက် နေပြီလား - Neo Mars International
ဂျပန်က ကိုယ်နေတဲ့ အခန်းဟာ ခိုက် နေပြီလား
October 15, 2021 May 10, 2022 by adminin Articles, Knowledge
ကျွန်မရဲ့ အရင်အိမ်ခန်းထဲမှာ ခုထိ အဖြေမပေါ်သေးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ပါပဲ၊ အဲဒီအကြောင်းကို သိလိုက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ နေရထိုင်ရတာ စိတ်မသိုးမသန့်နဲ့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။
လူသူမနေတော့တဲ့ စွန့်ပစ်ခံ အိမ်တစ်လုံး (Source – japantimes)
လူသတ်မှု၊ ဒါမှမဟုတ် ဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့ သေဆုံးမှု တစ်ခုခုဖြစ်ပွားထားတဲ့ အိမ်ခန်းမျိုးမှာ ကျွန်မ မနေချင်ပါဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း မသိချင်ပါဘူး။ လူသတ်မှုဖြစ်ထားတဲ့ အိမ်မှာ ဘယ်သူက နေချင်မှာလဲ?
ဒါပေမယ့် အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် အဲဒီလို အိမ်တွေမျိုးမှာ နေချင်တဲ့ လူအရေအတွက်ကလည်း တိုးပွားလားနေပါတယ်။ အကြောင်း အရင်းကတော့ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး ခိုက်တတ်တဲ့ အိမ်မျိုးတွေကို ရှောင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခုဆောင်းပါးထဲမှာ ဘယ်လိုမျိုး ရှာရ၊ ရှောင်ရမယ်ဆိုတာကို ဖေါ်ပြပေးသွားမှပါ။
ခိုက်တတ်တဲ့ အိမ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ?
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ထားတဲ့ အိမ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေ
အိမ်ခန်းတွေရဲ့ အရင်ပိုင်ရှင်တွေ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ရပ်တွေရှိထားခဲ့တဲ့ အိမ်တွေကိုတော့ Wake ari bukken jouhou center 事故物件じこぶっけん・ 訳わけあり 物件情報ぶっけんじょうほうセンター လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဂျပန်လို အပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ Shinriteki kashi bukken 心理的瑕疵物件しんりてきかしぶっけん ပါ။
Kashi 瑕疵かし ဆိုတာ “ပြစ်ချက်၊ အစွန်းအထင်း” စသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေလိုမျိုးအရာတွေမှာတော့ “kashi” ဆိုတာက အိမ်ဝယ်လက်တွေ၊ အိမ်ငှားတွေအနေနဲ့ အိမ်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲ အခြားထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ပြစ်ချက်လို့ မှတ်ယူထားတာမျိုးကို ခေါ်တာပါ။
လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်း၊ ကို့ယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မှု၊ မိသားစုလိုက် အဖြစ်ဆိုး စတာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှိတာမျိုးကို “kashi” လို့ခေါ်တာပါပဲ။ နောက်ထပ်တိုးအနေနဲ့ ယာကူဇာဂိုဏ်းတွေရဲ့ နေရာနဲ့ နီးတာမျိုး၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့ တစ်ခုခုရဲ့ ဌာနချုပ်တွေနဲ့ နီးတာမျိုးကိုလည်း ရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အရပ်ဘက်ဥပ‌ဒေတွေနဲ့ အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေမှာလည်း အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့ အိမ်ငှား/ဝယ်လက်တွေကို အိမ်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေရှိခဲ့ရင် အသိပေးရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကိုတော့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ငှား/ဝယ်လက်တွေကို ‌သူတို့ အသိပေးလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး အသိပေးတာမျိုး လုပ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အိမ်ရှင်တွေဘက်က ကြည့်ရင်လည်း အကုန်လုံးကို လိုက်မှတ်ထားဖို့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ (ဂျပန်မှာ အိမ်အရွှေ့အပြောင်းတွေက အချိန်နဲ့အမျှ ရှိနေတာပါ။)
တိုကျိုရှိ အိမ်ဟောင်းတစ်လုံး (Source- japantimes)
ဥပမာအနေနဲ့ အိမ်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လာမယ့် အိမ်ခန်းရဲ့ နှစ်နှစ်တာ သက်တမ်းကာလအတွင်းက ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုခုရှိလာခဲ့ရင် နောက်လာမယ့် အိမ်ငှား/ဝယ်လက်တွေကို အသိပေးမယ်လို့ ဖေါ်ပြထားနိုင်သလို၊ တချို့ကတော့ အနှစ် (၂၀) ဆိုပြီး သက်တမ်းကာလ ထားကြပါတယ်။ အများလက်ခံထားတာကတော့ (၅) နှစ်ကနေ (၁၀) နှစ်ကြားသက်တမ်းပါပဲ။
ဆယ်နှစ်တာ သက်တမ်းကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေရှိလာခဲ့ရင် နောင်လာမယ့် အိမ်ငှား/ဝယ်လက်လာတဲ့အခါ အသိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအိမ်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က နေထိုင်နေပြီး၊ ဘာမှ မဖြစ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် အိမ်ငှား/ဝယ်လက်လာတဲ့ အခါ အသိပေးစရာမလိုဘူးလို့ ဆိုထားပြန်ပါတယ်။
ဒီထဲမှာ ယိုပေါက်တွေရှိလာပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးလာငှားမယ့်သူကိုပဲ ဥပဒေအရ အသိပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီ အိမ်ငှား/ဝယ်လက်တွေ ပြောင်းရွှေ့သွားလို့ နောက်ထပ် ငှားမယ့်သူ၊ ဝယ်မယ့်သူတွေရှိလာတဲ့ အခါ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို အသိမပေးပဲထားလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလို ဥပဒေရဲ့ ယိုပေါက်ကို အသုံးချပြီး တချို့ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ မိသားစုတွေဟာ အိမ်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အမည်ကို သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား အသိတစ်ယောက်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမည်ခဏပြောင်းပြီး အနေပြတာမျိုး လုပ်ကြပါတယ်။
တချို့ကျတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ခဏသွားနေဖို့ ငွေကြေးပေးပြီး စေခိုင်းတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စတွေနဲ့ တရားတဘောင်တွေ ဖြစ်ကြတာ တရားရုံးတွေမှာ အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီကြီးတွေ တိုင်ပင်ပြီး ဘုံသဘောတူညီချက်အနေနဲ့ (၁၀) နှစ်တာ အိမ်သက်တမ်းကာလအတွင်းက ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေရှိလာခဲ့ရင် ဒုတိယမြောက် အိမ်ငှား/ဝယ်လက်တွေ အထိ အသိပေးကြဖို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ထပ် ယိုပေါက် တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ တတိယမြောက်အိမ်ငှားဖြစ်လာခဲ့ရင် အိမ်ရှင်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအရ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို မပြောပဲ ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုပါစို့၊ ကိုယ်က အိမ်အသစ်ရှာနေတယ်။ အိမ်ကလေးကလည်း အဆင်ပြေတယ်။ နေရာလည်း မဆိုးဘူး။ အလင်းရောင်နဲ့ လေဝင်လေထွက်လည်းကောင်းသလို၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဆိတ်ငြိမ်တယ်။ ဘူတာ၊ စျေးဆိုင်၊ အလုပ် အကုန်လုံးနဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာပဲ။ စျေးကလည်း မယုံနိုင်စရာကို ချိုလွန်းနေတယ်။ (ဂျပန်မှာ အိမ်ငှားတွေ စျေးအရမ်းမြောက်တာ အကုန်လုံးအသိပါ။) ~♪ Bingo♪
Souce – tokyotimes
ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ “ဖြစ်ရပ်ဆိုး” တစ်ခုခု ဖြစ်ပွားထားခဲ့တဲ့ အိမ်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ ဖြစ်ပွားထားခဲ့တဲ့ အိမ်တွေဟာ စျေးကွက်ပေါက်စျေးထက် 20% လျှော့ချပြီး စျေးဖွင့်ကြပါတယ်။ (ဒီထက်လည်း နည်းနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေအရပါ။)
ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားထားခဲ့တယ်လို့ ကိုယ်က တိတိကျကျ သိထားရင်တော့ အိမ်ရှင်ပြောတဲ့ စျေးကို တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ညှိယူပြီး ဆစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဆိုပါစို့။ ကိုယ်က အိမ်ခန်းလေးတစ်ခုကို ပြောင်းဖို့ ကြိုက်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိမ်ခန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ ရှိမရှိကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ?
လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ သာမန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားရုံတင်မဟုတ်ပဲ လက်လက်ထနေအောင် အကုန်ပြန်ပြင်ဆင်ထားပြီးမှ စျေးအရမ်းပေါနေတာမျိုးပါပဲ။ နောက်ထပ် အသေးစိတ်သေသေချာချာသတိထားကြည့်ရင် ကြမ်းခင်းတွေက အသစ်စက်စက်ဖြစ်နေပြီး နံရံတချို့က အဟောင်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေ၊ အိမ်သာထဲမှာ ဘိုထိုင်အသစ်တပ်ထားပေမယ့် အပြင်အဆင်နဲ့ နေရာချထားမျိုးက ရှေးခေတ် ဂျပန်အိမ်တွေလို ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ စသဖြင့် ရှိလာခဲ့ရင် သတိထားစရာပါ။
အဲဒီလိုမျိုး အရှေ့အနောက် သိပ်မညီတဲ့ အချက်တွေ တွေ့လာခဲ့ရင် အိမ်ရှင် ဒါမှမဟုတ် အိမ်ပွဲစား ကုမ္ပဏီကို သေသေချာချာမေးသင့်ပါတယ်။ အိမ်ငှား/ဝယ်လက်ဘက်ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်မေးလာခဲ့ရင် အိမ်ရှင်ဘက်က ဖြေပေးရဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ ကပ်လျက်အိမ်တွေမှာ လူရှိနေလား ဆိုတာမျိုးပါ။ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေဖြစ်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းတွေဘေးကနေ အိမ်နီးချင်းတွေက မကြာခင်မှာပဲ ပြောင်းရွှေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီလို အိမ်မျိုးတွေကို ရှောင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ငှားခ/ ခေါ်စျေးကို ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေသာ တကယ်ရှိနေခဲ့ရင် လျှော့ခိုင်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်မေးလို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းနေပြီဆိုရင်တော့ အိမ်ရှင်ရဲ့ အမူအယာကို အကဲခတ်ပါ။ (တချို့ ဂျပန်တွေ လိမ်ရင် အမူအယာပျက်တာ အတော်လေး သိသာပါတယ်။)
အဲဒီလိုမျိုး တိုက်ရိုက်မေးယူရတာမှ အဖြေလည်းမရ၊ ဆက်ဆံရေးပျက်မှာလည်း ကြောက်နေရင် အောက်က အချက်လေးတွေကို မေးယူပြီး အဖြေကို သွယ်ဝိုက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီအိမ်မှာ အရင်အိမ်ငှားက ဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့တာလဲ? အိမ်ငှားမရှိပဲ လွတ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ?
ငှားပြီး နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ အိမ်ထပ်ပြောင်းသွားတာလား?
သူတို့ အိမ်ပြောင်းလာတာက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကာလ (ဥပမာ – မတ်လ) လိုမျိုးလား? ဘာလို့ပါလဲ?
အဲဒီလိုတွေမေးလို့ အိမ်ရှင်က ဖြေဖို့တွန့်ဆုတ်နေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် မသိဘူးလို့ ဘူးခံငြင်းလာရင်လည်း စိတ်ချလက်ချ သိပ်ယုံလို့ မရသေးပါဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာအားကိုးပြီး ရှာရတော့မှာပါ။
နောက်ထပ် သတိထားရမှာမျိုးတွေက အိမ်ရှင်ရဲ့ စကားတွေပါ။ “ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နေရာလေး”၊ “ငါတို့တောင် မင်းတို့နဲ့ တူတူလာနေချင်နေပြီဟေ့”၊ “ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီစျေးလောက်တန်တာမျိုး ဘယ်တော့မှ မရဘူး” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေသုံးလာပြီဆိုရင်တော့ သေသေချာချာ သတိထား စစ်ဆေးရတော့မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ အိမ်တွေက စျေးပေါတတ်တယ်ဆိုတာကို သိပြီး လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ရှင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ အိမ်ရှင်ရော ကိုယ်ပါ စကားပြောရတာ သက်တောင့်သက်တာ ဖြစ်သွားမှာပါ။
ကိုယ်က အိမ်ရှင်ကို မေးနေပေမယ့် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ လိုရင်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ အိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အင်တာနက်တွေမှာ ရှာရတော့မှာပါ။
SUUMO အိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီဆိုရင် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့တာမျိုးကို ကွယ်ဝှက်မထားပါဘူး။
အဲဒီကုမ္ပဏီဆိုရင် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေဖြစ်ထားတဲ့ အိမ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ကွယ်ဝှက်မထားတဲ့အပြင်၊ ဆန်းသစ်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေနဲ့ မားကတ်တင်းပါ ပြန်လုပ်ပါတယ်။ အောက်က စာက သူတို့ရဲ့ ကြော်ငြာပုံတွေထဲက တစ်ခုပါ။
ပြစ်ချက်လေးနဲ့ အိမ်လေးတွေ♪ လူကြိုက်များတဲ့ ပြစ်ချက်ရှိတဲ့ အိမ်လေးများ♪ စျေးတန်♪ Tokyo Disneyland အနီး♪ ကိုယ်ပိုင်အိမ်သာနဲ့ ‌ရေချိုးခန်းတွဲလျက်♪ ပြစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာက စျေးတန်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ! တစ်ယောက်တည်း နေပေမယ့် တစ်‌ယောက်ယောက်က အဖေါ်ပြုပေးနေသလို ဘယ်တော့မှ အထီးကျန်မှာ မဟုတ်ပါ။ အထီးကျန်တတ်တဲ့ single လေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး♪
ကြော်ငြာထဲမှာတော့ စာသားချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ရယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကပုံတွေရယ်၊ အပိုထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ ချစ်စရာသရဲဇာတ်ကောင်လေး Obake-no-Q-taro お 化ばけのQ 太郎たろう ကိုပါ ပူးတွဲ ကြော်ငြာထားတာပါ။
Obake-no-Q-taro お 化ばけのQ 太郎たろう ဆိုတာကတော့ Doraemon ドラえもん ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Fujiko Fujio 藤子不二雄 ကပဲ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ သရဲဇာတ်ကောင်လေးပါ။
စျေးကတော့ တစ်လကို ယန်း ၂၃,၀၀၀ (US$230) နဲ့ စပေါ် လည်း ပေးစရာမလိုပါဘူး။ မီးဖိုချောင်၊ ဝရံတာ၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး 107 square-foot တောင်ကျယ်တာပါ။ ဒီလို မားကတ်တင်းကောင်းတာ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လိုလိုချင်ချင်နဲ့ နေချင်တဲ့သူတွေ အများအပြား လာရှာကြပါသတဲ့။
Oshima Teru CAVEAT EMPTOR ဆိုတာကတော့ Manabu Oshima က (၂၀၀၅) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတစ်ခုပါ။
Oshima Teru မြေပုံ
Website ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေမှာ ဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့ သေဆုံးမှုတွေနဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ သတင်းမျိုးတွေကို မြေပုံအလိုက်အတိကျ သတင်းဌာနက သတင်းတွေနဲ့ တွဲပြီး တိတိကျကျဖေါ်ပြပေးဖို့ပါ။ မီးတောက်ပုံလေးတွေနဲ့ ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ နေရာတွေကတော့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ ဖြစ်ထားခဲ့တဲ့နေရာတွေပါပဲ။
စစချင်းတုန်းကတော့ တိုကျိုနဲ့ အနီးတဝိုက်ကိုပဲ ဖေါ် ပြပေးတာပါ။ ခုကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြောက်အမေရိကနဲ့ ဥရောပဘက်ကိုပါ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြလာပါတယ်။ သူတို့ဖေါ်ပြချက်တွေအတွက် ရဲဌာနတွေက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေက ဖေါ်ပြချက်တွေ၊ တရားရုံးတွေက အမှုအခင်းတွေနဲ့ နေရပ်လိပ်စာတွေကိုပါ အတည်ပြုရည်ညွှန်းတာတွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီဆိုက်ဟာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သတင်းတွေကလည်း သတင်းဌာနတွေက တိုက်ရိုက်ကိုးကားတာမို့ တိကျတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Oshima Teru ရဲ့ အားသာချက်က သတင်းဌာနတွေကို ကိုးကားတာမို့ အားနည်းချက်အနေနဲ့ တချို့မြို့ကြီးတွေမဟုတ်ရင် သတင်းမတက်ပဲ မဖေါ်ပြထားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားတွေကို မေးဖို့ပဲ ရှိတော့တာပေါ့။
“ဒီအိမ်လေးက စျေးအရမ်းချိုနေပါတယ်၊ ဒါဟာ ဒီအိမ်ခန်းတစ်ခုပဲလား? ဒါမှ မဟုတ် ဒီနားတဝိုက်ကိုက စျေးချိုတာမျိုးလား?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေပါ။ မေးပါများ စကားရဆိုသလို၊ အချိန်ကုန်ပေမယ့် အဖြေတစ်ခုတော့ ရလာနိုင်မှာပါ။
ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်တွေအကြောင်းကို အိမ်ရှင်တွေကို ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတာကို ကျွန်မပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခြေအနေအတော်များများမှာ အိမ်ရှင်တွေဟာ တိုက်ရိုက်မေးလာခဲ့ရင် အမှန်အတိုင်းပြောကြတာများပါတယ်။ ဖုံးကွယ်ထားရင် တရားစွဲခံရမှာ ကြောက်ကြလို့ပါ။ တချို့ အိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီတွေ အဲဒီလို ဖုံးကွယ်တိမ်းရှောင်ခဲ့လို့ တရားစွဲခံရပြီး ဒေဝါလီခံသွားရတာတွေ ရှိပါတယ်။
ခိုက်တတ်တဲ့ အိမ်တွေကို ပြောင်းဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား? ဒါကတော့ ကိုယ့်ဖာသာဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။
တချို့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြုံထားခဲ့ရတဲ့ အိမ်တွေထဲကို ပြောင်းသွားကြတဲ့ သူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာ “အခင်းဖြစ်ပွားတုန်းက ရုပ်အလောင်းတွေရဲ့ အနံ့အသက်တွေ နွေရာသီကာလတွေနဲ့ စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ပြန်ထွက်လာတာမျိုးတွေ”၊ “စိတ်ခြောက်ခြားပြီး ညည အိပ်မပျော်တာမျိုးတွေ” ကြုံကြရတယ်လို့ ပြန်ပြောင်းပြောကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ကိုယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိင်မှာပါ။
ကျွန်မကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သိပ်မကြံ့ခိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို အိမ်မျိုးတွေမှာ မနေချင်သလို၊ ဖြစ်ရပ်ဆိုး အကြောင်းကိုလည်း မကြားသိချင်ပါဘူး။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ကရော? ခိုက်တတ်တဲ့ အိမ်မျိုးတွေမှာ နေချင်စိတ်ရှိကြလား? ဖြစ်ရပ်ဆိုးဆိုတာမှာ ဘယ်အဆင့်လောက်၊ အတိုင်းအတာလောက်အထိဆိုရင် မမှုဘူးလဲ? လက်ရှိ ဂျပန်မှာနေတဲ့သူဆိုရင်‌ရော ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ အကြောင်းကို ရှာကြည့်ဖူးပါသလား?
Previous Postတိုကျို ဟော်လိုဝင်
Next Postဂျပန်နိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်